रंग खुइलिँदै गएको रंगशाला – Sourya Online
रंग खुइलिँदै गएको रंगशाला
सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ६ गते २:११ मा प्रकाशित
देशको स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनको पर्याय मानिनुपर्ने दशरथ रंगशाला कुनै बेला सरकारी भिजिलान्ते अर्थात् मण्डले उत्पादन केन्द्र थियो, राजाको पञ्चायत यतैबाट थामिन्थ्यो । भर्खरै दिवंगत भएका छोटे राजा शरद्चन्द्र शाहको हालीमुहाली चल्थ्यो यहाँ । यो एक रहस्यमय शक्तिकेन्द्र थियो । पञ्चायतको समाप्तिपछि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् शरद्चन्द्र शाहबाट त मुक्त भयो तर शरद्चन्द्र शाह प्रवृत्तिबाट मुक्त भएन । सत्तासीन दलले शाहको लिगेसी थामेका छन् । यसलाई विशुद्ध खेलको प्रतिष्ठान बन्न दिइएको छैन । शक्तिका उन्मादीहरूले अझै पनि यसलाई आफ्ना लठैत उत्पादन गर्ने केन्द्र नै बनाइरहेका छन् । अहिले पनि भूतले तर्साउँछ त्यहाँ– कुव्यवस्थापक, स्वार्थलम्पट, भ्रष्टाचारी भूतले । खै अरू भूत त छन् जस्तो लाग्दैन, एउटा डरलाग्दो भूत त्यहाँ छँदै छ, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने भूत †
सधैँ बनेपा–काठमान्डु–पनौती लेखिएको इन्जिन गन्हाउने बसबाट काठमान्डुतिर ओहोरदोहोर गरिरहने मेरो निम्ति काठमान्डु एक यान्त्रिक सहर थियो । यहाँका हरेक गल्ली र साँझहरू मजस्तो आउटसाइडरका लागि मायावी हुन्छन् । कुनै साँझहरू किंवदन्तीजस्ता पनि हुन्छन् । हो, दशरथ रंगशालाअघि एउटा रेस्टुराँमा कुनै लेखकसँग मात्तिनेगरी भट्टीगमन गरेपछि मलाई त्यो साँझ त्यस्तै कुनै किंवदन्तीले छोपेभैँm लागेको थियो । किनभने, त्यस साँझ म ढुन्मुनिँदै दशरथ रंगशालाभित्र पसेको थिएँ । एउटा सुनसान रंगशाला । फुस्रो र धमिलिएको आकाश । एउटा फलैँचामा बसेर म कुनै भुक्तभोगीबाट रंगशालाको इतिहास सुन्दै थिएँ । यहाँको मधुरो प्रकाशमुनि म रंगशालाको अग्लो स्टेजमा फुटबलरहरूको प्रतीक्षामा चाहिँ थिइनँ ।
दशरथ रंगशालाको त्यो भव्य रूप देखेर मैले कहिल्यै जिब्रो टोकेको थिइनँ । थुप्रैपटक त्यस अगाडिको बाटो आहोरदोहोर गरिरहने मजस्तो मान्छेलाई त्यहाँको भव्यताले नलठ्याउनु ठिकै हो । यो नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाभित्र पस्दा कुनै खेलकुदप्रेमी वा सुदूर गाउँको मान्छे भावुक हुनुचाहिँ स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको यो भव्य रंगशालाले इतिहासको गर्भमा अलौकिक सूचना लुकाएर राखेको छ भन्ने थाहा पाउँदा भने मन रोमाञ्चित हुन्छ ।
२०१३ सालमा रंगशालाको खाका तयार हुनुअघि यो ठाउँ मसानघाट थियो । यहाँ कुपोन्डोलको बाग्मती पुलनजिकै बस्ने जोगी र काठमाडौंका पोडेहरूको लास जलाइन्थ्यो । उसबेला भूतले तर्साउने डरले साँझ परेपछि मान्छेहरू रंगशालाको बाटो हिँड्न निकै डराउँथे । अहिलेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हल र रंगशालामा रात परेपछि कोही खेलिरहेजस्तो आवाज सुनिन्थ्यो । के अहिलेको यो साँझ पनि मलाई कुनै अभौतिक भूतले तर्साउला ? अहँ † रात गाढा हुँदा पनि त्यस्तो केही भएन । ०११ सालसम्मै यहाँ भूतको बास छ भनी विश्वास गरिन्थ्यो । दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म रंगशाला वरिपरि पुग्न सबै डराउँथे । यस्तै, हाल फुटबल मैदान भएको स्थान पहिले पोखरी थियो । पोखरीमा आफूतिर तान्ने केही अदृश्य शक्ति छ भन्ने सोच व्यापक थियो । रंगशालाको उत्तर प्यारापिटतर्फ पहिले ठूलो बाँसको झ्याङमा नाग भएको र त्यो नाग निकै डरलाग्दो हुन्थ्यो भन्ने जनविश्वास थियो । त्यहाँको कभर्ड हलभित्र राति १२ बजे अनौठो एकहोरो किसिमको आवाज आउँथ्यो । कोही ब्याडमिन्टन वा फुटबल खेलिरहेजस्तो आवाज गुन्जिरहेको हुन्थ्यो र त्यो आवाज निकै चर्को हुन्थ्यो ।
०१३ सालमा राजा महेन्द्रले राज्य सञ्चालन–सुरु गरेबाटै लेखिन्छ दशरथ रंगशालाको कथा । उनको राज्याभिषेकको अवसरमा कुस्ती, ब्याडमिन्टन, फुटबल र एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गरियो । उसैबेला उपयुक्त ठाउँको अभाव महसुस गरी ‘सानो टुँडिखेल’लाई नै आधुनिक रंगशालाको स्वरूप दिइने हुकुम जारी भयो । यो निर्माणकार्यमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नरशमशेर जबराको उल्लेखनीय पहल थियो । स्वदेशका र भारतबाट समेत मजदुर झिकाई द्रूत गतिले निर्माण अगि बढ्न थाल्यो । श्रमिकले रातदिन पसिना बगाए । र, अन्तत: तयार भयो– कच्ची रंगशाला । त्यसपछि करिब ९ वर्ष माटो मात्रै सम्याइएको रंगशालाको लमतन्न फाँट बेवारिसे बन्यो । शर्मा एन्ड एसोसिएट दिल्लीले डिजाइन गरेको रंगशालासम्बन्धी पहिलो सम्झौता चीन सरकारसँग सिमेन्ट र छड लिने गरी भएको थियो । किरण शमशेरले रंगशालाको निर्माणको जिम्मा पाए र पोखरी सम्याउन थाले । रंगशालाको पूर्वतिर सेनाको सानो ब्यारेक थियो र डाँडो पनि । उत्तरतिर बाँसको ठूलो झ्याङ । दक्षिणतर्फको भागचाहिँ खुल्ला थियो । घाँसे मैदान तयार पारिएको थिएन । पहिलो फुटबल खेल ६० मिनेट मात्रैको थियो । प्रतियोगिताको दिन धुलो उड्ने डरले सधैँ पानी छर्किने गरिन्थ्यो । राज्याभिषेक कपमा नेपालमै पहिलोपल्ट ‘फ्लड लाइट’को प्रयोग भएको थियो । बिजुली अड्डाबाट लाइट झिकाएर बत्तीमा फुटबल म्याच खेलाइएको थियो ।
महेन्द्रको हुकुमबाट प्राप्त जग्गामा निर्माण सुरु गरिएको रंगशालाको ०२८ सालमा पूर्व र उत्तरतिर ५–५ लाइनको प्यारापिट तयार पारियो । २०३१ सालमा भने पुन: चीन सरकारसँग सम्झौता गरी रंगशाला तयारी अवस्थामा ल्याइयो । तर, त्यतिबेला यो रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको थिएन । २०३५ सालदेखि भने रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रयास थालियो । कुल ३१ लाखको बजेटमा २०३७ सालमा रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्‍यो ।
०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको चितवनमा निधन भएपछि जेठा छोरा वीरेन्द्रलाई नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरियो । राज्याभिषेक २०३१ सालमा हुने निर्णय भएपछि रंगशाला निर्माण कार्यलाई झन् जोडतोडका साथ सुरु गरियो । चीन सरकारसँग रंगशाला निर्माणका लागि पुन: सम्झौता भयो । छड र फलामका डन्डीहरू चीनबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिए ।
दशरथ रंगशालाले ०४४ सालमा अत्यन्त दर्दनाक चोट बेहोर्‍यो । यही साल फागुन २९ गते आएको ठूलो हुरीबतासका कारण ७३ जना दर्शकले रंगशालामै ज्यान गुमाए । त्यतिबेला अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को आयोजनामा त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्डको फाइनल भइरहेको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेश मुक्तियोद्धाबीचको खेल सञ्चालन भइरहँदा अचानक आएको आँधीका कारण भागाभाग भयो । रंगशालाका सबै ढोका नखोलिएको हुँदा भागाभागमा किचिएर एकै ठाउँमा त्यति धेरै दर्शक दिवंगत भएको त्यो घटना विश्व फुटबलका शीर्ष १० दुर्घटनामध्ये पर्छ ।
त्यतिबेलासम्म मैदान पश्चिम दक्षिण र उत्तरतिरको प्यारापिट अगाडि नांगो काँडे तारले घेरिने गरिन्थ्यो । तर, ४४ सालको दर्दनाक ‘रंगशाला काण्ड’पछि काँडे तारबाट मैदान घेर्न छोडियो । यही घटनाका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले र सदस्य–सचिव शरदचन्द्र शाहले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
त्रिपुरेश्वरको यस बहुउद्देश्यीय रंगशालाको इतिहास खेलकुदसँग मात्रै जोडिएको छैन, यसले त राजनीति र संस्कृतिका अनेक आयाम पनि आफूभित्र समेटेको छ । यसले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको छ– यहाँ कसरी विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वका बहुचर्चित शव ल्याएर भावपूर्ण अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्ने गरिन्छ । कसरी मानिसहरूले ‘नेपाली राजनीतिमा धूमकेतुसरी उदाएर धूमकेतुसरह नै विलुप्त भएका’ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितदेखि लिएर लौहपुरुष गणेशमान सिंह, सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मलाई अन्तिमपटक चिरनिद्रामा सुतिरहेको अश्रुपूर्ण नयनले कतिकति बेर हेरिबसेका थिए । नाम यसले रंगशाला पाएको छ, यस्ता अभूतपूर्व शोकमा डुबेर चढाइने श्रद्धाञ्जलीका बेला यसको नाम शोकशालाझैँ लाग्छ । शोकलाई कुनै उल्लासको रंगमा घोलेर परिभाषित गर्न सकिँदैन भन्ने नबुझेको राजनीतिक वृत्तले रंगशालामै शोकको बाढी लगाइरहन्छ बेलाबेला ।
लाग्छ, खेलाडीको घर भनेकै रंगशाला हो । तर, नेपालको अस्तव्यस्त रंगशालबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्न । आफ्नो खेल जीवनको आधाभन्दा बढी समय आफ्नै राष्ट्रको रंगशालामा बिताउने खेलाडी नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाबाट डिप्रेस्ड छन् ।
भुँडी घटाउनेदेखि घाम ताप्नेसम्म रंगशालामै आइपुग्छन् । रंगशाला पछिल्लोपटक बैँसोन्मत्त नवजोडीहरूको ‘डेटिङ स्पट’ र नजरतृष्णाको समाधिस्थल पनि बनेको छ । खेलको रंग यसले मेटाइदिएको छ र रंगशालाको मैदानलाई काम वासनाको बहनाले उत्तेजनाको डुंगा बहाउने नदी बनाइदिएको छ । अब रंगशाला र टुँडिखेलमा केही फरक देखिँदैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग यसप्रति उति गम्भीर नभएकाले रंगशालामा लापरबाही बढेको तर्क परिषद्का एकजना सदस्यको छ । रंगशाला केही लागुऔषध दुव्र्यसनीको समेत सुरक्षित थलो बन्ने गरेको गुनासो स्थानीयवासी गर्छन् । केही लागुऔषध प्रयोगकर्तासमेत रंगशाला पस्ने र यहीँ दिन बिताउने गर्छन् ।
भिडभाडका दिन रंगशाला कुनै पनि बेला भत्कन सक्छ । यहाँ विषेशगरी फुटबलका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छन् । खेलकुदबाहेक मनोरञ्जन, राजनीतिक सभासम्मेलन अनि अन्य विविध कार्यक्रम पनि यही रंगशालामा आयोजना हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट गुगलमा उल्लेख गरिएअनुसार दशरथ रंगशालाको दर्शक क्षमता २५ हजार छ । पछिल्लोपटक गरिएको अनुसन्धानले भने रंगशालाको दर्शक क्षमता १८ हजार मात्र रहेको देखाएको छ । रंगशालाको दर्शक क्षमता मापन नगरिएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । कति दर्शक थेग्न सक्छ त रंगशालाले, यस सम्बन्धमा पनि कुनै अध्ययन नै गरिएको छैन वर्षौंदेखि । आयोजक र प्रायोजकलाई दर्शकको भिडले फाइदै हुन्छ, त्यसैले दर्शकको संख्या नघटोस् भन्नेमा उनीहरू बढी नै सचेत हुन्छन् । व्यवस्थापनको त्रुटिका कारण रंगशालामा मच्चिने साधारण झडप र कुटपिटका घटनाभन्दा धेरै भयंकर दुर्घटना हुनसक्छ । तर, हजाराँैको संख्याका दर्शकको भारलाई रंगशालाले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? लाग्छ, यसबारेमा सोच्ने मानिस यस भूखण्डमा जन्मिसकेको छैन ।
दर्शक क्षमता मात्रै होइन, रंगशालामा प्रयोग भएका बिम, आर्क, प्लेटलगायतको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि मूल्यांकन गरिएको छैन, तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे कसैलाई पत्तो छैन । रंगशालाको प्यारापिट चकिर्एको छ, भित्ताहरू फुटेका छन्, पर्खाल भत्किएको छ । कति दर्शक अटाउन सक्छन् भनेर वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान गरिएको छैन, हचुवाकै भरमा दर्शकलाई रंगशालामा प्रवेश दिने गरिएको छ । क्षमताभन्दा बढी दर्शक रंगशालामा जम्मा हुँदा रंगशालाको प्यारापिटसँगै दर्शकको ज्यान पनि धरापमा रहिरहनेछ । त्यस्तो खतरनाक स्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने ?
रंगशाला बाहिर निस्किन्छु । सामुन्ने देखिन्छ–पसल, वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, रेस्टुराँ, होटल । बाहिर त निकै गुलजार छ । रमिता हेर्ने, किनमेल गर्ने, आवत–जावत गर्ने, त्यहाँ देखिन्छ अर्कै संसार । रंगशालाबाहिरको बूढो स्लिम रूखका हाँगाहरूमा बसेर कागहरू कराइरहेका छन् । कागको ‘गीत’ झर्कोलाग्दो छ र छ ‘एब्स्ट्रयाक्ट’, शंकर लामिछानेको ‘एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन : प्याज’ जस्तै । बाहिरको धमिलिएको फुस्रो आकाशजस्तै रंगशालाको इमेज पनि खिइँदै र धमिलो हुँदै छ । चारैतिर भिडभाडको आवाजसँगै रंगशालाको तस्बिर पनि फनफनी घुमेझैँ लाग्छ । रंगशाला मेरो आँखाबाट ओझेल पर्दै जान्छ । शून्य रंगशालालाई छाडेर बाहिरको भिडमा बेपत्ता हुन्छु …।
जनता आवासका घर ठडिए तर भुक्तानी आएन
माङसेबुङ गाउँपालिका सदरमुकामसँग सम्पर्कविच्छेद
किसानका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
पकहामैनपुर गाँउपालिकाको भवनको शिलान्यास
ताप्लेजुङमा पाँच दिनदेखि दूर–सञ्चार सेवा अवरुद्ध
पहिरोले अवरुद्ध भएको दिक्तेल–काठमाडौं सडक सञ्चालनमा
दुई मुक्तकसंग्रह एउटै मञ्चबाट
एमाले महाधिवेशन मूल समितिले पायाे पूर्णता (सूचीसहित)
१० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलबाट भीम रावलले राजीनामा दिए
अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध काम गर्छ : मन्त्री झाँक्री